Manchester United oo Dhaafi Weysay 10 Cayaartooy oo Southampton ah,Maxa Laga Baran Kara Kulankaasi – Bandhiga
Manchester United oo Dhaafi Weysay 10 Cayaartooy oo Southampton ah,Maxa Laga Baran Kara Kulankaasi
Kooxda Man United aya kulan adag la cayaarta kooxda ay Southampton ciyaar xiiso badneed oo labada dhinac ay si weyn isku weerarayn.
United-ka aya booqatay Garoonka St. Mary kooxda United ayana ku dhibtootay inay dhaafan 10-cayaartoy oo kooxdaasi ah.
Cayaartoyga Daniel James oo u cayaara Man United aya daqiiqadii 10aad dhaliyay gool kaasi oo uu hoganka ugu dhiibay kooxdiisa,balse waxa diiday Jannik Vestergaard kasi oo daqiiqadii 58 aad u dhaliyay goolka barbar dhaca ah.
Wiilasha Southampton aya qeeybtii danbe ee kulanka ku cayaarayay 10 cayartoy,kadib markii uu karaka cas ka qaatay Kevin Danso,laakin kooxda Southampton aya ku guuleystay inan loo dhaafin gooshooda.
kulanka aya ku soo idlaaday gar isku mid ah,iyado garsoore Mike Dean uu bixiyay kaarar gaaraya 5 kaar oo digniin ah iyo mid guduud ah waxana daawanayay kulankan 30499 oo tagerayaal aha.
MAXA LAGA BARAN KARA KULANKAN.
Kevin Danso waa ciyaaryahankii ugu horreeyay ee Southampton ee lasiiyo karaka cas iyado uu so muqanayay markii ugu horreysay Premier League.
Jannik Vestergaard, oo dhaliyay goolkiisii ugu horreeyay ee Southampton, ayaa ah ciyaaryahankii seddexaad ee deenish ah ee u dhaliyay Saints Premier League, ka dib Ronnie Ekelund iyo Pierre-Emile Højbjerg.
Daniel James ayaa dhaliyay seddex gool afartii kulan ee Premier League ee uu u ciyaaray Manchester United; Kaliya wuxuu dhaliyay seddex gool 22-kii kulan ee ugu dambeysay ee uu u saftay kooxdiisii hore ee Swansea City.
Aaron Wan-Bissaka ayaa 10 ka hortag sameeyay kulankii Southampton, isagoo noqday xiddigii ugu horreeyay ee 10+ taakal ah sameeya kulan Premier League ah xilli ciyaareedkan.
Markii ugu dambeysay ee Man Utd ay badiso kulan Premier League ah oo marti ah Romelu Lukaku ayaa dhaliyay labo gool, Alexis Sánchez ,Chris Smalling iyo Fred aya kuso bilaawday,iyado Lix bilood laga joogo mar xaladaasi.
Man Utd ayaa laga dhaliyay gool madax ah Premier League markii ugu horeysay tan iyo 27kii Febraayo iyago ka hor jeeday kooxda C/ Palace, Kulankaas sidoo kale wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee 19-kulan oo isku xigta.